Shirkad cusub oo fududeyneysa keenista iyo dhoofinta badeecadaha oo ka howlgashay Dekada Muqdisho ( DAAWO SAWIRADA ) | Somalisan.com Home
Shirkad cusub oo fududeyneysa keenista iyo dhoofinta badeecadaha oo ka howlgashay Dekada Muqdisho ( DAAWO SAWIRADA )
2/20/2013 5:10:00 P
Xafladii furitaanka shirkadaasi ayaa waxaa ka soo qeybgalay ganacsato,iyo mas’uuliyiin sida Maareeyaha dekada Xamar C/laahi Cali Nuur,Xildhibaan Prof.C/raxmaan Ibbi,Gudoomiyaha rugta ganacsiga C/kariin Gabayre,ganacsato kale iyo madaxda shirkada cusub. Waxaa dekada Muqdisho ka howl bilaabay 22 sano kadib shirkad fududeyn doonta guud ahaan badeecadaha dalka yimaada iyo kuwa ka dhoofa taasoo loogu magac daray Simatech shipping islamarkaana qaban doonta adeeg 22 sano ka hor dalka ugu danbeysay.
Xafladii furitaanka shirkadaasi ayaa waxaa ka soo qeybgalay ganacsato,iyo mas’uuliyiin sida Maareeyaha dekada Xamar C/laahi Cali Nuur,Xildhibaan Prof.C/raxmaan Ibbi,Gudoomiyaha rugta ganacsiga C/kariin Gabayre,ganacsato kale iyo madaxda shirkada cusub. Shirkadaani cusub waxay guud ahaan badeecadaha ku keeni doontaa ama ku dhoofin doontaa Konteenaro aad u badan kuwaasoo iminka dekada la soo gaarsiiyay waxaana ka hadlay xaflada iyo wax qabadka shirkada mas’uliyiin kala duwan.
Ugu horeyn waxaa saxaafada la hadlay Gudoomiyaha shirkada cusub Yacquub Abuukar Cali kaasoo sheegay in badeecadaha dalka yimaada oo awal dhib badan lagu qabay sidii dalka lagu keeni lahaa ay iminka si fudud ku keeni doonaan dalka iyadoo aaney jirin badeecad dalal kala duwan marba laga soo rarayo.
Sidoo kale Gudoomiye ku xigeenka shirkada Cusub Ismaaciil Gooni ayaa si faahfaahsan uga hadlay waxay shirkadaani qaban doonto ama uga duwan tahay shirkadihii hore waxaana uu sheegay inay mas’uul ka noqon doonto shirkada badeeco kasta oo la dalbado ku keeni kuna qaadi doonto kunteenar xifdin doona badeecadahaasi.
“shirkadaani 22 sano kadib waxay soo celineysaa adeegii badeecadaha sida tooska ah looga keeni jiray dalalka dibada iyadoo ay meesha ka bixi doonto badeecad shiinaha laga soo qaaday oo dubai lagu furo kadibna la soo qaadayo,hada waxaasi way dhamaadeen badeecada toos ayaa looga keeni doonaa aduunka meesha ugu danbeysa si fudud iyo waqti kooban ayaana dalka lagu keeni doonaa”ayuu yiri Ismaaciil gooni